December 2020 – Justnow news
December 31, 2020 author Comments0Comment
၂၀၂၀ ခုနှဈ ‘The Top 10 Couples’ အတှကျ Dim Sum Entertainment မှ စဈတမျးကောကျယူခဲ့ပွီး ဒီစာရငျးကို ထိုငျးဇာတျလမျးစုံတှဲတှကေ အသီးသီးနရောယူထားကွတာဖွဈပါတယျ။ 1. Pope Thanawat & Bella Ranee စာရငျးရဲ့ထိပျဆုံး နံပါတျ ၁ နရောကို အပိုငျသိမျးထားကွတဲ့အတှဲကတော့ Pope Thanawat နဲ့ Bella Ranee ပဲဖွဈပါတယျ။ Pope နဲ့ Bella ကတော့ အတှဲညီတဲ့သရုပျဆောငျတှအေဖွဈ အားလုံးကလကျခံထားကွပွီး “Roy Leh Marnya” နဲ့ “Buppesunnivas” မှာ အတှဲလိုကျအကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျခကျြတှကေို ပွသခဲ့ပါတယျ။ 2. Mark Prin & Mew Nittha Mark Prin နဲ့ Mew Nittha တို့ရဲ့အတှဲညီခကျြကိုတော့ “My Husband in Law” ဇာတျလမျးထဲမှာ ကွညျ့ရှုသူတှမွေငျတှခေဲ့ရမှာပါ။ အလှပဆုံးရှုခငျးတှနေဲ့ ဟာသနှောပွီးကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ ဇာတျလမျးဇာတျအိမျကို မွငျသာခံစားမိအောငျ ရိုကျကူးနိုငျခဲ့လို့ နံပါတျ ၂ နရောမှာရပျတညျနပေါတယျ။ ဒီထိုငျးဇာတျလမျးတှဲကွောငျ့ပဲ Mark နဲ့ Nittha ဟာ ဆုတှေ ရရှိခဲ့ပါသေးတယျ။ 3….
ဒူးနာခါးနာတဲ့ မိဘတွေအတွက် အကျိုးများမယ့် ဆေးနည်း
ဘဲဥကိုပွက်နေသော ရေနွေးအိုးထဲ့ကို ၂ မိနစ်ခန့်ပြုတ်လိုက်ပြီး ဆယ်ယူလိုက်ပါ ။ဆယ်ယူလိုက်သည့် ဘဲဥကို ပန်းကန်လုံးထဲ့ကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပါ ။စားကောင်းစေရန် သကြားအနည်းငယ် သင် စားကောင်းစေလောက် သည့် အနေအထားသို့ထည့်ပြီး ခေါက်စားလိုက်ပါ ။ တခြားမည်သည် အရာမှ ရောစပ်ပြီး မစားရပါ ဘဲဥတလုံးကိုတော့ ကုန်အောင် စားရပါလိမ့်မည် ။တနေ့ကို ဘဲဥတလုံးကို ကုန်အောင်စားရပါလိမ့်မည် ။ ထိုနည်းအတိုင်း နေ့စဉ် ဘဲဥတလုံးစီ စားသုံးရမည်၊ အနည်းဆုံး မိမိအသက်၏ တဝက် အလုံးရေအထိ စားသုံးရမည် ။( ဥပမာ ) အသက် ၄၀-နှစ်ရှိလျှင် အနည်းဆုံး ဘဲဥ အလုံးရေ (၂၀ ) စားသုံးရမည် ။ ထိုထက် များများစားသုံးနိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။ဘဲဥစားသုံးခြင်းသည် လိုအပ်သော ခြင်ဆီဓာတ်အတွက် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖြစ်ပါသည် ။ထိုကဲ့သို့ စားသုံးခြင်းဖြင့် ခါး-ဒူးတို့တွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ခန်းခြောက်ခြင်းကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ခါးနာ ဒူးနာများ သက်သာပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။ လေမဖြတ်စေရန် အတွက် ” လေဖြတ် ရောဂါသည် ကြောက်စရာအလွန်ကောင်း၏ ။တစ်ခါထဲသေသွားရင် ဘာမှမဖြစ်သော်လည်း နာတာရှည်မလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင်ဘဝသည် သေတာထက်ဆိုး၏ ။လုပ်ကိုင်ပေးရသော မိသားစုသည်လည်း ကြာလာတော့ငြိုငြင်လာတက်သည်။ ဒါကြောင့် တသက်လုံးလေမဖြတ်အောင်…
ကိုယျခံအား ကို မွငျ့တကျစတေဲ့ ကွကျသှနျနီ သံပုရာဆမျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ကောငျးကြိုးလေးတှကေို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ ကွကျသှနျနီ သံပုရာဆမျး အခဉျြကို ထမငျးနဲ့ စားစား ဘာနဲ့ စားစား မြားမြားစာပေးခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အကြိုးမြားစပေါတယျ။ အလှနျရိုးရှငျးပွီး လုပျရ လှယျကူတဲ့ မီးဖိုခြောငျထဲက ဆေးနညျး တမြိုးဖွဈတဲ့ ကွကျသှနျနီ သံပုရာ ဆမျး ပွုလုပျပုံလေးကတော့.. ၁။ ကွကျသှနျနီကို ဖငျဖွတျ၊ ခေါငျးဖွတျ၊ အခှံခှါပါ။ ၂။ ပုံထဲက အတိုငျး အကှငျးလိုကျ လှီးထားပါ။ ရမေဆေး ပါနဲ့။ ၃။ ကွကျသှနျနီပျေါကို သံပုရာသီး ညှဈထညျ့ ပါ။ ၄။ ခြိုတဲ့ အရသာ ပျေါလာပါမညျ ။ မှနျတဲ့ အနံ့မြား ပြောကျ သှားမညျ။ ၅။ ၎င်းငျးကွကျသှနျနီ သံပုရာ ဆမျးကို မကွာခဏ စားပေးပါ။ ထမငျးနှငျ့ သျော ၎င်းငျး၊ အခွား အစားအစာမြားနှငျ့ သျော၎င်းငျး တှဲစားနိုငျ ပါသညျ။ ဒီနညျးကတော့ ထမငျးစားခါနီး ၂ မိနဈအတှငျး အလှယျတကူ ပွုလုပျ၍ စားသုံးနိုငျတဲ့ အလှယျနညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီထကျ ပိုအခြိနျပေးပွီး လုပျနိုငျပါက…
“ကငျဆာရောဂါ ကွောကျစရာမလိုတဲ့ အားလူးစိမျး ဖြျောရညျ”
ယနဂေ့ပြနျနိုငျငံမှာ ဓါတျစာဖြျောရညျတဈမြိုး ခတျေစားနပေါသညျ။ လူအမြား စိတျဝငျစားလာအောငျ စတငျဖျောထုတျ ဆျောသွ ခဲ့သူကတော့ ဂပြနျဗုဒ်ဓဘာသာ ဘုနျးတျောကွီး အရှငျ တိုမီဇာဝ ဖွဈပါတယျ။ ထငျပျေါကြျောကွားလာတဲ့ ဓါတျစာဖြျောရညျကတော့ အာလူးစိမျး ဖြျောရညျ ပဲဖွဈပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံ မှာ အာလူးစိမျး ဖြျောရညျ ကွောငျ့ ရောဂါ သကျသာ ပြောကျကငျးသှားရတဲ့ လူနာတှေ ၊ လူနာရှငျ တှေ ဆီက ကြေးဇူးတငျကွောငျး ပလူပြံသလို ရောကျလာတဲ့ စာတှေ အရှငျတိုမီဇာဝ လကျခံရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဆရာတျောက ဒီနှဈထဲမှာ ကငျဆာ အမြားအပွားဟာ အာလူးစိမျးဓါတျစာကို မှီဝဲခဲ့ကွပွီး ပမာဏ တျောတျောမြားမြားဟာ သိသိသာသာ သကျသာသှားပွီး သမေငျးနှုတျခမျး ဝက ပွနျလာနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။ အသုံးပွုပုံကတော့ အာလူးအစိမျး လတျလတျဆတျဆတျကို ရစေငျအောငျဆေးပွီး ထုထောငျးပါမယျ။ ပွီးမှ ပိတျစိမျးပါးနဲ့ထုပျပွီး အရညျရအောငျ ညှဈယူပါမယျ။အဲဒီအရညျ ဖနျခှကျ တဈခှကျမှ နှဈခှကျ နစေ့ဉျ မှီဝဲသှားမယျဆိုရငျ အသညျးရောဂါ၊ ဆီးခြိုရောဂါ၊ အစာအိမျရောဂါ၊ ကြောကျကပျရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သှေးတိုးရောဂါ၊ ခါးနာ၊ ပုခုံးနာ၊ ကြီးပေါငျးနာ ရောဂါတှေ ပြောကျကငျး စတေယျလို့ဆိုပါတယျ။ ပြောကျကငျးကွောငျး အနယျနယျ အရပျရပျက ထောကျခံစာမြား…
အဆီဖု၊ တင်းတိပ်နှင့် အမဲစက်များအတွက်
အဆီဖု၊ တင်းတိပ်နှင့် အမဲစက်များအတွက် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းကောင်း ဒီခေါင်းစဉ်က မေးတဲ့သူအရမ်းအရမ်းများပေမယ့် Irene တင်မယ့်အလှည့်ကိုမရောက်နိုင်လို့ ဒီနေ့တော့ ဖြစ်အောင် တင်ပါပြီရှင် ဒါကတော့ ထောပတ်စေ့သွေးလိမ်းနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဆောင်းရာသီဆိုတော့ ထောပတ်သီးပေါ်ချိန်လည်းရောက်ပြီလေ ပါဝင်ပစ္စည်း ထောပတ်စေ့ ပြုလုပ်ပုံ / အသုံးပြုပုံ ထောပတ်သီးရဲ့ အစေ့ကို နေပူပူတွင် ၃-၄ ရက်လောက် အခြောက်လှန်းပါ အညိုရင့်ရောင်ဖြစ်လာတဲ့အထိ လှမ်းထားပါ အခွံခြောက်များကို ခွာပါ ရေဖြင့် သန့်စင်အောင်ဆေးပါ သနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ပေါ်တွင် ရေအနည်းငယ်ဖြင့် သွေးပါ တစ်ရက်တစ်ကြိမ် မျက်နှာသန့်စင်ပြီးတိုင်း မထူမပါးလိမ်းပေးနိုင်ပါတယ် တစ်ချို့ကတော့ ညဘက်လိမ်းအိပ်ကြတဲ့အထိ တော်တော်လေးအဆင်ပြေကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အသားအရေချင်းမတူကြတော့ အားလုံးအတွက် ခြုံပြီး အကြံပေးရရင် လိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ်အကြာ ရေနဲ့မျက်နှာပြန်သစ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာပါက လိမ်းတာကို ရပ်လိုက်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းလေးက ရိုးရှင်းပေမယ့် အကုန်အကျသက်သာပြီး ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်လို့ အားလုံးသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Sharing is caring မို့လို့ မသိသေးတဲ့သူများအတွက် share လေး တစ်ချက်နဲ့ ကူညီပေးလိုက်ကြရအောင်နော်… ချစ်သော Irene Pretty Unicode အဆီဖု၊ တင်းတိပ်နှင့် အမဲစက်များအတွက် အဆီဖု၊ တင်းတိပ်နှင့် အမဲစက်များအတွက်…
အိုလာရင်သားသမီးတွေပယ်တာခံရတာပါပဲဆိုတဲ့ အသက်၇၇နှစ်အရွယ် ဆိုက်ကားဆရာအဘိုးအိုရဲ့အဖြစ်
ကျနော်ကားပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်ပဲဆိုက်ကားဆရာတချို့ရောက်လာတယ်သန်မြန်တဲ့လူတွေမို့အတင်တိုးဝှေ့ပြီးသူ့ထက်ငါဦးအောင်မေးကြတယ် အကိုဘယ်သွားမှာလဲဘယ်ပို့ပေးရမလဲပေါ့ကျနော့်မှာလဲပစ္စည်းကများများစားစားသယ်စရာပါမလာတော့ ကျနော်ဆိုက်ကားမငှားတော့ဘူး အကိုတို့လို့ပြောလိုက်တယ်ကိုလဲမြို့သားမဟုတ်တော့တော်ယုံအထုပ်နဲ့တော်ယုံခရီဆို ကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီး လမ်းလျောက်လေ့ရှိတယ် အဲ့လိုနဲ့ဆိုက်ကားဆရာတွေလူစုခွဲနောက်ဆုတ်သွားမှ နောက်ကအဖိုးအိုတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ် ငါ့တူလေးဘယ်ကိုသွားမှာလဲဦးလေးဆိုက်ကနဲ့လိုက်ပို့ပါရစေတဲ့ မေးလိုက်တဲ့ပုံကလဲတခြားဆိုက်ကားဆရာတွေနဲ့မတူဘူးဗျ တခြားဆိုက်ကားဆရာတွေဆို ဆိုက်ကားခေါ်မလားဘာညာမေးတယ် အခုအဖိုးအိုကတော့ ဦးလေးဆိုက်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပါရစေတဲ့ကျနော်လဲဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘူး ဟုတ်ကဲ့လိုက်ပို့ပါဥိးလေးဆိုပြီးပြောလိုက်တယ် တခြားဆိုက်ကားဆရာတွေကတောင်နောက်ကတီးတိုဝေဖန်သံကြားလိုက်မိပါတယ် ဒီကောင်အရူးစိတ်မမှန်ဘူးဆိုပဲ အဲ့လိုနဲ့ကျနော်တို့ဆိုက်ကားနဲ့ထွက်လာကြရင်း ကျနော်ကနဲနဲစပ်စုကြည့်တယ် ဦးလေး ဦးလေးမှာသားသမီးမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့ငါ့တူရယ် အကြီးကောင်ကရဲထဲမှာဒုရဲအုပ် အလတ်မကကျောင်းအုပ်ဆရာမ အငယ်ဆုံးသားကတော့ မှန်လုံကားမောင်းတယ် တဲ့ဦးလေးနဲ့အတူနေကြတာလား ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး သူတို့အိမ်ထောင်တွေနဲ့ပါသူတို့ကတာဝန်ကျရာနယ်တွေမှာပါ တဲ့ဒါဆိုဦးလေးတို့အဖိုးအဖွား၂ယောက်ထဲနေတာပေါ့နော် ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဦးလေးတယောက်ထဲနေတာပါ ဦးလေးမိန်းမကဆုံးသွားပြီ တဲ့ဘာလို့သားသမီးတွေနဲ့လိုက်မနေတာလဲဦးလေး လို့ကျနော်ထပ်မေးလိုက်တယ် နေချင်တာပေါ့ငါ့တူရယ်နေလဲနေပြီးပါပြီ မိဘတွေအိုလာရင်သားသမီးတွေကပယ်ထားကြတာတစ်ကယ်တော့မိဘဆိုတာ အိုပယ်တွေပါ တဲ့ကျနော်အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ် ရင်ထဲမှာဆို့တက်လာလို့ ဘာမှဆက်မမေးနိုင်တော့ဘူး ကျနော်သွားမဲ့လမ်းဆုံရောက်တော့မှမနဲအသံထွက်မေးလိုက်ရတယ်ဦးလေးဘယ်လောက်ကျလဲဗျ ဆိုတော့၅၀၀ ပါငါ့တူတဲ့ ကျနော်အိပ်ထဲက ၁၀၀၀၀ တန်၂ရွက်ထုပ်ပေးလိုက်တယ် မယုံနိုင်သလိုအံ့သြတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကျနော်ကိုပြောတယ် ၅၀၀ ပဲကျတာလေငါ့တူတံ့ဟုတ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံကဦးလေးကိုကျနော်ကန်တော့တာပါဆိုတော့ တုင်တုန်ယင်ယင်လက်တွေနဲ့လှမ်းယူလိုက်တယ် ဆုတွေလဲမဆုံးနိုင်အောင်ပေးနေပါတော့တယ်နောက်ထပ် ၅ လလောက်ရှိလို့ကျနော်အဲ့ဒီဆိုက်ကားဂိတ်ကိုပြန်ရောက်တော့ ဒီဂိတ်ကဆိုက်ကားဆရာဦးလေးကြီးရောလို့အနားကကွမ်းယာဆိုင်ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါအခုဆောင်းအဝင်လွန်ခဲ့တဲ့တလကပဲသူ့ရဲ့တဲအိမ်လေးထဲမှာတယောက်ထဲဆုံးသွားပြီး၃ရက်လောက်နေမှ ရပ်ကွက်ကသိတယ်တဲ့နောင်ဘဝတွေမှာအခုလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့မကြုံပါစေနဲ့ဦးလေးရယ်လို့ ဆုတောင်းပေးရုံကလွဲပြီး ကျနော်ဘာများတတ်နိုင်တော့မှာလဲဗျာဘယ်သူမှအပြစ်မတင်လိုပါဘဝကံကြွေးကိုခုရွယ်ထိပေးဆပ်နေရတဲ့ အသက်(၇၇)နှစ်အရွယ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့အဖိုးအိုတယောက်ဝမ်းစာရေးကိုပင်ပမ်းကြီး စွာလုပ်ကိုင်နေရတာတွေ့လို့တတ်နိုင်သလောက် လေးအကူညီပေးခဲ့မိပါတယ် သံဝေဂ ရစရာပါ မိဘတယောက်ဟာသားသမီးများစွာကိုပြုစုလုပ်ကြွေးနိုင်ပေမဲ့သားသမီးတစုဟာ အတုံ့အလှည့်မပြန်နိုင်ကြတာက အင်မတန်ကိုဘဲဝမ်းနည်းစရာတခုပါ သူ့ကံနဲ့သူတော့မှန်ပါတယ်တန်ဖိုးလလွန်ကြီးမားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတော့မသေ ခင်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်အငါတ်ခံပြီးပြုစု လုပ်ကြွေးကာ မိဘကျေးဇူးတရားတွေကိုဆပ်ပေးကြပါလို့ လူငယ်များစွာကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ Credit tartay Unicode အိုလာရင်သားသမီးတွေပယ်တာခံရတာပါပဲဆိုတဲ့ အသက်၇၇နှစ်အရွယ် ဆိုက်ကားဆရာအဘိုးအိုရဲ့အဖြစ် ကျနော်ကားပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်ပဲဆိုက်ကားဆရာတချို့ရောက်လာတယ်သန်မြန်တဲ့လူတွေမို့အတင်တိုးဝှေ့ပြီးသူ့ထက်ငါဦးအောင်မေးကြတယ် အကိုဘယ်သွားမှာလဲဘယ်ပို့ပေးရမလဲပေါ့ကျနော့်မှာလဲပစ္စည်းကများများစားစားသယ်စရာပါမလာတော့ ကျနော်ဆိုက်ကားမငှားတော့ဘူး…
December 30, 2020 author Comments0Comment
လှေခါးအဆံ တပ်ဆင်ခြင်း သိကောင်းစရာများ ရှေးကျမ်းဆရာတို့သည် စုံမ နှစ်ခုလုံး တပ်ကောင်း၏ဟုဆိုသည် လက်သမား ကျမ်းဆရာတို့က မကိုသာ တပ်စေပါတယ်။ လက်သမား ဆရာကြီးများမှာ စုံတပ်သည်လည်းရှိတယ် မတပ်သည်လည်း ရှိပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပထမအထစ်မှ **လာဘံ သုခံ မရဏံ **လာဘ သုခ မရဏ တွက်ယူကာ မရဏံ မရဏ ကို ရှောင်ပါတယ်… ပ ထစ်က လာဘ ဒု ထစ်က သုခ တ ထစ်က မရဏ လာဘ က လာတ်လာဘ ပေါများခြင်း သုခ က ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း မရဏ က ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ ။ လာဘ – ၁ထစ် ၊ ၄ ထစ်၊ ၇ ထစ် သုခ – ၂ ထစ်၊ ၅ထစ် ၊ ၈ ထစ် မရဏ- ၃ ထစ် ၊ ၆ ထစ် ၊ ၉ ထစ် ၊ ၁၂ ထစ် စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အိမ် အနေအအထား…
အိမ်တော်ရာ စေတီတော်မြတ်ကြီးမှ ရောင်ခြည်တော်ကွန့်မြူခင်း၊ မြေစောင့်နတ်ရုပ်ထုမှ အလိုအလျောက် ရေစက်ရေပေါက်ကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်
နတ်တော်လပြည့်နေ့ တွင်အိမ်တော်ရာ စေတီတော်မြတ်ကြီးမှ ရောင်ခြည်တော်ကွန့်မြူခင်း၊ မြေစောင့်နတ်ရုပ်ထုမှ အလိုအလျောက် ရေစက်ရေပေါက်ကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ် မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ သီရိဟေမာအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ၂၇x၂၈ လမ်းကြား၊ ၈၈x၈၉ လမ်းကြားရှိ ပုဂံမင်းတည်ထားကိုးကွယ်တော်မူခဲ့သော မဟာလောကရံသီ အိမ်တော်ရာ စေတီတော်မြတ်ကြီးနှင့် အရံစေတီတို့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက်နေ့(နတ်တော်လပြည့်နေ့) မွန်းလွဲပိုင်းက အလင်းတန်းများထွက်ပေါ်ခြင်း၊ ဝသုနြေ္ဒနတ်ရုပ်တု၏ ဆံပင်အဖျားမှ ရေစက်ရေပေါက်ကျခြင်းများ ထူးခြား တိုက်ဆိုင်စွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ဂေါပကရုံးက လျှပ်စစ်အကူဝန်ထမ်း ဦးရဲဝင်းအောင် က ထမင်းစားဖို့ အိမ်ပြန်စဉ်မှာ ဝသုနြေ္ဒ နတ်ရုပ်တု အောက်ခြေမှာ ရေအိုင်နေလို့ ကြည့်တဲ့အခါမှာ ရုပ်တုရဲ့ ဆံပင်အဖျားကနေ ရေစက်ရေပေါက်တွေ အောက်ကို ကျနေတာ စတင်တွေ့ရှိလို့ ကျွန်တော့်ဆီ အကြောင်းကြားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဂေါပကအဖွဲ့ ဥကကဋ္ဌ ကနေတဆင့် ဆရာတော်ကြီးများထံ ဆက်လက်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်”ဟု ဂေါပကအဖွဲ့ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးညွန့်မြိုင်က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ဝသုနြေ္ဓရုပ်တုသည် ဘုရားဝင်းအတွင်း ပွင့်တော်မူဘုရားအနီးတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ ထက်မနည်းက တည်ရှိခဲ့ပြီး ပြန်လည်မွမ်းမံထားရှိကာ အမြင့် ၃ပေခန့်ရှိ အင်္ဂတေဖြင့် ထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။”ရုပ်တုရဲ့ အောက်ခြေမှာ ရေပိုက်ရှိတယ်လို့ အရင်ဘုရားဝန်ထမ်းအချို့က ပြောတာရှိလို့ ရုပ်တု ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာကြည့်ပေမယ့်…
မတ်တရာနယျ ပိုငျရှာကဦးဆငျကို လူတှေ အသိမြားတာဟာ ဆနျစကျပိုငျရှငျ သူဌေးကွီး တဈဦးဖွဈလို့ ဆိုတာထကျ အင်ျကြီဗလာ၊ လုံခညျြဖာတဈရာနဲ့နှားကြောငျးသားဘ၀က ဗွုနျးစားကွီး ဆနျစကျပိုငျရှငျ အဖွဈ ပွောငျးလဲသှားတာရယျ၊ သသေညျ အထိ ပုတီးတဈကုံးနဲ့ ပုတီးမပွတျ စိပျနလေရှေိ့တာရယျ၊ သူ့အိမျဝမှာ “အရဟံ” ဆိုတဲ့ စာလုံးဆိုငျးဘုတျ အကွီးကွီး ရေးထားတာရယျတို့ကွောငျ့ပါပဲ။ ဒီ “အရဟံ” ဆိုတဲ့ စာလုံးဆိုငျးဘုတျကွီးကွောငျ့ပဲ သူ့ကို “အရဟံ ဦးဆငျ” လို့ လူတှကေ သိကွချေါကွတာပါ။ ဦးဆငျဆိုတာ ငယျငယျက သာမဏဘေ၀နဲ့ မန်တလေးမွို့ မစိုးရိမျကြောငျး တိုကျ ဆရာတျောကွီး ဘဒ်ဒန်တသူရိယာဘိဝံသ (နောငျ အဘိဓဇမဟာရဋ်ဌဂုရု) ထံမှာ နသှေားခဲ့ဖူးတယျ။ ရဟနျးမဖွဈခငျမှာဘဲ သူ့ဒကာကွီး ဆုံးပါးသှားလို့ မိခငျနဲ့ လူမမယျ ညီ၊ ညီမငယျတှကေို လုပျကိုငျကြှေးဖို့ လူထှကျလိုကျရတယျ။ လယျယာမွပေိုငျ မရှိတဲ့အတှကျ သူမြားအိမျမှာ ထှနျယကျ နှားကြောငျးသူရငျးငှား ဘ၀နဲ့ လုပျကိုငျစားရတဲ့ဘ၀မှာ မိသားစုက စားအိုးကွီးတဲ့အတှကျ အသကျထိနျးရုံ အရှကျလုံရုံ အနိုငျနိုငျဖွဈလို့ လုံခညျြခါးနှမျး ကြောနလှေမျးဘ၀မှာ အိမျက ခနျော ခနဲ့ခတျေသဈ ကာက၀လိယလို့တောငျ ဆိုနိုငျလောကျပါ သတဲ့။ ဆရာသမားရဲ့ ဂုဏျကြေးဇူးကို အမွဲ ဦးထိပျထားတတျတဲ့…
Mick Tongraya က တော့ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး မငျးသားခြောပါ။အသကျက တော့ ၂၈ နှဈပါ။လကျရှိမှာတော့ ထိုငျး CH7နဲ့ လကျတှဲ ပွီး အလုပျလုပျ နပေါတယျ။Mick Tongraya က တော့ ၂ဝ၂၁ မှာ ကားသဈ ကွီး နဲ့ အပွတျ လနျး တော့မှာပါ။ကားသဈ ပိုငျဆိုငျသှားတဲ့ အကွောငျးကို တော့ သူ့ရဲ့ Instagram မှာ ဝမြှေထားပါတယျ။သူ့ရဲ့ IG မှာတော့ P’Poo Mik နဲ့ အတူတူ ကားသဈ ကွီး ရှမှေ့ာ ရိုကျထားတဲ့ ပုံကို တငျထားပါတယျ။”ထောကျခံ လကျခံပေးလို့ ကြေးဇူး တငျပါတယျ။နှဈသဈ လကျဆောငျ ..” ဆိုပွီး တငျထားပါတယျ။ IG Story မှာ တော့ ကားသဈကို အန်တရာယျကငျးစဖေို့ ဘုနျးကွီးက အန်တရာယျကငျး ပရိတျ ရေ တှေ နဲ့ ပကျ ဖွနျးပေးနတေဲ့ ပုံ၊ကားသဈကို စမျး မောငျး နှငျ ကွညျ့ နတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ တှကေို တငျထားပါတယျ။ Mick Tongraya…